Steel sodina Sodina Blind Flange, Nickel firaka Tube - Houdong
SSAW sy HSAW Steel Sodina
Miolakolaka welded Sodina
Firaka Steel Sodina
Magnésium firaka Tube
Firaka Hollow Tube
Titanium firaka Sodina
TAPAKA FANTSONA Welding
API 5L Sodina
SS Sodina Tube
Stainless Steel miray volo Tube sodina
Stainless Steel Tube Sodina
Sodina mety tsara & Flange
hanefy mety tsara
Ahoana no mifidy Stainless vy flange ara-nofo?
Toetra manokana ny hafanana eny ambonin'ny fitsaboana
Quality mahatonga ny tsena sy ny mpanjifa manompo manao ny marina. Izahay miarahaba anareo tonga soa hamangy ny orinasa noho ny fiaraha-miasa sy ny fandraisana ny fampandrosoana.
Ny orinasa dia manana voasoratra anarana renivohitry ny 188 tapitrisa yuan sy mandrakotra ny faritra ny 108 hektara. Ny orinasa dia naorina teo an 2008. Ny orinasa dia manana sampana telo vy sodina miolakolaka zavamaniry telo andalana famokarana vy sodina.
ORINASA MPANAMBOATRA, ary manome vy sodina, sodina mety flange
No itokiantsika mpamatsy, marina famakiana ny tsena ao an-toerana, ary indrindra ho an'ny ny vidin fifaninanana faran'izay tsara. Manome ny mpanjifa miaraka amin'ny feno ny hatsaran'ny tolotra isan-karazany no laharam-pahamehana.
Mpanamboatra NY sodina Fittings SY vy sodina
Lehibe indrindra orinasa misahana ny famokarana sy ny fivarotana fantsona vy sy ny sodina Fittings in Avaratra Shina
Hebei Houdong Pipeline Equipment Co., Ltd. Faritany yanshan faritra fampandrosoana, faritanin'i Hebei, "orinasa mpamokatra entana Shina fitaovana fantsona fototra". Ny orinasa dia manana voasoratra anarana renivohitry ny 188 tapitrisa yuan sy mandrakotra ny faritra ny 108 hektara. Ny orinasa naorina tamin'ny 2008 sy ny "fitaovana fantsona Hebei houdong Co., Ltd." dia naorina teo an 2017. Ny orinasa 160 izao dia manana mpiasa sy mihoatra ny 30 matihanina sy ara-teknika personnel.Is fitambarana vy sodina Fittings, harafesiny insulation, fantsona fampandrosoana ny teknolojia sy ny orinasa mpamokatra entana, fantsona Accessories orinasa mpamokatra entana, fantsona fitaterana fizarana, ao an-tokantrano sy ny varotra ivelany toy ny iray amin'ireo indostria lehibe sy ny vondrona ara-barotra orinasa.
API 5L LSAW Steel Sodina Water for Solika Entona Transp ...
FBE Epoxy Powder harafesiny Sodina
321 / 321H Stainless Steel Sodina / Tube
309s / 310s Stainless Steel Sodina / Tube
Stainless Steel welded Sodina
Tonga soa eto amin'ny mpanjifa mba hanontany antsika, dia manaiky ny 24 ora fifampidinihana, matihanina mba hanome hafanana sy voahevitra vokatra sy ny tolotra
38F, No 88, yincheng lalana, pudong distrika vaovao, Shanghai, Shina
Hebei houdong fitaovana fantsona mpiara., LTD. Faritany yanshan faritra fampandrosoana, faritanin'i Hebei, "fitaovana fantsona Shina orinasa mpamokatra entana base"
316nb Sodina Stainless Steel , Sodina Stainless Steel , 304 316 Stainless Steel Sodina , Stainless Steel Sodina, Welded Stainless Steel Sodina, 2 mirefy Stainless Steel Sodina ,